MPT Myanmar | Moving Myanmar Forwardဩဂုတ် 2017 - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Month: ဩဂုတ် 2017
GENERAL » ဘောလုံးစတား
၁။ ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း မှာ သတင်းအချက်အလက် ၀န်ဆောင်မှုတွေက ဘာတွေပါလဲ ?
ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း မှ နေ့စဉ် ဘောလုံးသတင်းအစုံအလင်ကိုနှင့် အခြားအားကစားသတင်း များကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် အတွက် ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေပါတယ်။
၃။ ဘောလုံးစတား မှ သတင်းအသစ်တွေကို နေ့စဉ် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖတ်ချင်ပါတယ်။ ဘယ်နေရာမှာ ဖတ်လို့ ရလဲ ?
ဘောလုံးစတား မှ သတင်းအသစ်တွေကို နေ့စဉ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖတ်နိုင်ရန်အတွက် ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း ကို မိမိ၏ မိုဘိုင်းဖုန်းထဲသို့ ထည့်သွင်း (install) လုပ်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်
၅။ ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း ကို Download ဖို့ ကျွှန်တော့ဖုန်းမှာ Internet ဘေမရှိဘူး ၊ အခမဲ့ Download လုပ်လို့မရဘူးလား ?
ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း ကို Internet ခ ကုန်ကျမှုမရှိဘဲ အခမဲ့ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
လိုတရ ဝက်ဆိုဒ် (http://lotayamm.com/) စာမျက်နှာတွင် ရှိသော Download Link မှ အခမဲ့ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
၇။ ကျွန်တော့ လျှို့ဝှက်နံပါတ် (password) မေ့သွားရင် ဘယ်လိုုလုပ်မလဲ?
လူကြီးမင်း၏ လျှို့ဝှက်နံပါတ် (password) မေ့သွားပါက ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း ထဲတွင် Forgot Password ကိုနှိပ်၍ မိမိ ၀န်ဆောင်မှုယူရာတွင် အသုံးပြုထားသော MPT ဖုန်းနံပါတ်ကို ပြန်လည်ရိုက်ထည့်ပေးရပါမည်။ ထိုအဆင့်များပြီးပါက BalloneStar မှ လူကြီးမင်း၏ ဖုန်း Message Box ထဲသို ဂဏန်း ၆ လုံးပါသော (××××××) ကုဒ်နံပါတ် တစ်ခုပေးပို့ပါမည်။ ထိုကုဒ်နံပါတ်ကို ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း ထဲတွင် ပြန်လည်ရိုက်ထည့်ပြီး လျှို့ဝှက်နံပါတ် (password) အသစ် ပြန်လည် ပြုလုပ်ရ မည်ဖြစ်ပါသည်။
၉။ တခြားဖုန်းနံပါတ်နဲ့ ၀န်ဆောင်မှုယူလို့ မရဘူးလား?
MPT ဖုန်းနံပါတ်တစ်မျိုးတည်းဖြင့်သာ ၀န်ဆောင်မှု ရယူနိုင်ပါသည်။
၁၁။ ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း မှ သတင်းတွေ နေ့စဉ် ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ ဝန်ဆောင်ခ ဘယ်လို ကောက်ခံပါသလဲ ?
သတင်းဝန်ဆောင်ခ အတွက် ၁ ရက် ၁၀၀ကျပ် ၊ တစ်ပါတ်စာ အတွက် ၅၀၀ ကျပ် ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး အခွန် ၅% ကိုပါ ပေးဆောင်ရပါမည်။
၁၃။ ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း ကို အခမဲ့ အသုံးပြုလို့ ရပါသလား?
ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း ကို ဝန်ဆောင်မှု စတင်ရယူသူ များအတွက် (၇) ရက် တစ်ပတ် အခမဲ့ အသုံးပြုခွင့် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၅။ ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း မှာ ဝန်ဆောင်မှု ရပ်တန့်ပြီးမှ ဘောလုံးစတား၏ ဝန်ဆောင်မှု ပြန်လည်ရယူလိုလျှင် ဘယ်လို လုပ်ရမှာလဲ?
ဝန်ဆောင်မှု ပြန်လည်ရယူလိုပါက 8118 သို့ RR ဟုစာတို ပေးပို့ကာ ပြန်လည် ရယူ နိုင်ပါသည်။
၁၇။ ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း မှာ ဘာသတင်းတွေ ပါဝင်မှာလဲ ?
Ballone Star တွင် ပွဲစဉ်ဇယားများ၊ ပွဲစဉ်ရလဒ်များ၊ ပွဲပြီးသတင်းများ၊ ပွဲပြီးသုံးသပ်ချက်များ၊ ပွဲကြိုခန့်မှန်းချက်များ၊ ပြိုင်ပွဲတစ်ခု၏ အကောင်းဆုံး အမှန်ဆုံး ၃ပွဲ ခန့်မှန်းချက်များ၊ အသင်းတိုင်း၏ ခန့်မှန်း ကစားကွက်၊ လူစာရင်းများ၊ ဒဏ်ရာရ၊ ပွဲပယ် ခံရသူများ အကြောင်း၊ ပရီးမီးယားလိဂ်၊ လာလီဂါ၊ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ၊ စီးရီးအေ၊ လီဂူး အစရှိသည့် ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး လိဂ်ကြီးများ၏ သတင်းအပြည့်အစုံ၊ အကြိုက်ဆုံးပွဲ ၊ ဆောင်းပါးများ ၊ ခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲများ ၊ ရုပ်သံပြကွက်များ စသည်တို့ကို စုံလင် ပြည့်စုံစွာ ထည့်သွင်း ဖော်ပြ ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၉။ ဘောလုံးစတား Facebook နှင့် လိုတရ ဝက်ဆိုဒ်က နေဘောလုံးစတား ရဲ့ ဘောလုံးသတင်းတွေကို ဖတ်မယ်ဆို ရင် မရဘူးလား?
ဘောလုံးစတား Facebook မှာတော့ ဘောလုံးသတင်းတစ်ချို့၊ သတင်းခေါင်းစဉ်များ၊ ဘောလုံးစတား ကျင်းပပြုလုပ်မည့် Promotion အစီအစဉ်များကို သာ အဓိကထား တင်ပေးမှာပါ၊ လိုတရဝတ်ဆိုဒ် တွင်သတင်း အပုဒ်ရေ အနည်းငယ်သာတင်ပေးမှာပါ။
၂၁။ Internet အသုံးပြုခ ဘယ်လောက်ကုန်မှာလဲ ?
သတင်းများအတွက် တစ်ရက်ကို 20 MB မှ 50 MB ဝန်းကျင် ကုန်ကျမှာဖြစ်ပြီး ဗီဒီယို သတင်းများအတွက် တော့ မိမိ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့သည့် သတင်းပေါ်မူတည်ပြီး ဒေတာ MB ကုန်ကျမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၃။ ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း မှာ ဘောလုံးပွဲတွေရော လောင်းလို့ရပါသလား ?
ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း မှာ ဘောင်လုံးပွဲ လောင်းကစား “လုံးဝ” လုပ်လို့မရပါဘူး။
၂၅။ ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း မှာ ပါဝင်သည့် ခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲဆိုတာ ဘာလဲ?
ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း ၏ ၀န်ဆောင်မှုရယူထားသူများကို ကျေးဇူး တုန့်ပြန်သော အနေဖြင် Lucky Draw အစီအစဉ်များ ထည့်သွင်းထားချင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲ အပြင် အခြားသော အစီအစဉ် အသစ်များကိုလည်း အလျှင်းသင့်သလို စီစဉ် ထည်သွင်း ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၇။ ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း မှာ ခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲက နေ့စဉ်ရှိတာလား ?
ခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲက တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ် ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အခြား Lucky Draw အစီအစဉ် များ ထည့်သွင်းပေးသွား ပါမည်။
၂၉။ ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း မှာ ကျွှန်တော်တို့ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အသင်းရဲ့ သတင်းကြီးဘဲ သီးသန့် လိုချင်ပါတယ် ၊ ရနိုင်မလားခင်ဗျား ?
မိမိကြိုက်နှစ်သက်သော အသင်း၊ ကစားသမား၊ ဒိုင်များ နှင့် ပြိုင်ပွဲများအားလုံးကို သီးသန့် ဖတ်ရှုနိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ သတင်းများ၏ အောက်ခြေတွင်ပါဝင် သော (#name) ကို နှိပ်ပြီး သီးသန့်ရယူ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
၃၁။ ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း ကို မိမိ မိုဘိုင်းဖုန်းမှ Uninstall ပြုလုပ်လိုက်ရင် ဖုန်းဘေလ်ထဲမှ နေ့စဉ် ဝန်ဆောင်ခ ဖြတ်တောက် သေးလား ?
MPT ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုယူထားသူများမှာ Uninstall ပြုလုပ်သည်ဖြစ်စေ မပြုုလုပ်သည်ဖြစ်စေ MPT ဖုန်းဘေလ်မှ ဝန်ဆောင်ခကို ဖြတ်တောက်သွား မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဝန်ဆောင်မှု ကို ပယ်ဖျက်လိုပါက Uninstall မပြုလုပ်မီ “8118” သို့ “UNSUBBS” ဟု စာတို ပေးပို့ ရပါမည်။
၃၃။ ကျွှန်တော်တို့က မြန်မာနိုင်ငံမှာ မဟုတ်ပါဘူး Oversea ကနေ ဘယ်လို အသုံးပြုလို့ ရနိုင်မလဲ (Subscribe) လုပ် လို့ရပါလဲ ?
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှ မဟုတ်သော အခြားနိုင်ငံမှသူများလဲ (Subscribe) ပြုလုပ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှု ရယူနိုင်ရန်အ တွက် ကြိုးစားနေပါတယ်။ ယခုလောလောဆယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသာ (Subscribe) ပြုလုပ်နိုင်မှာပါ။
၃၅။ iPhone မှာ အသုံးပြုလို့ရလား ?
iphone အတွက် လောလောဆယ် အသုံးပြုလို့မရသေးပါဘူး။ မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာ Apple App Store မှ Download ရယူနိုင်ရန်စီစဉ်နေပါတယ်။
၃၇။ UniCode Font နဲ့မှရတာလား နှင့် ZawGyi font နဲ့မှရတာလား?
UniCode နှင့် ZawGyi မည့်သည့် Font နှင့်မဆို သတင်းများ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ မြန်မာစာအတွက် စိတ်ပူစရာ မလိုဘဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၃၉။ ပွဲကြို တင်ပေးပါသလား ?
၄၁။ အယ်ဒီတာအကြိုက် ဆိုတာဘာလဲ?
ပွဲကြိုတွေထဲမှ ဘောလုံးစတား အယ်ဒီတာအဖွဲ့ ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးနဲ့ အဖြစ်နိုင်ဆုံးပွဲများကို အချက်အလက်စုံစံ လင်လင်နဲ့ တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ ကဏ္ဍ ဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲကြိုများမှ အကောင်းဆုံးပွဲများကို ပြန်လည် တင်ဆက်ပေးတဲ့ အစီအစဉ်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၄၃။ ဂိုးရလဒ်တွေ တင်ပေးလား ?
ဂိုးရလဒ်သတင်းများအတွက် ဘောလုံးစတားမှာ ဂိုးရလဒ် ကဏ္ဍရှိပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်၊ လီဂူးဝမ်း၊ စီးရီးအေ၊ လာလီဂါ၊ ချန်ပီယံလိဂ် စသည့် အသင်းများ၏ ဂိုးရလဒ်များ စုံစုံလင်လင် တင်ပေးပါတယ်။
၄၅။ ဗီဒီယိုသတင်းကဏ္ဍ ဆိုဘာတွေပါလဲ။
သတင်းများအားလုံးအတွက် ဗီဒီယိုသတင်းများ ပြန်လည်ဖော်ပြပေးသည့် အပြင် ၊ High Light Video များကို အင်တာနက်မှ Search Engine အနေနဲ့ အသုံးပြုကာ ပြန်လည် ဖော်ပြပေးပါတယ်။
၄၇။ ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း မှာနေ့စဉ်တင်တဲ့ သတင်းတွေကို အခြား Social လူမှုကွန်ယက် တွေမှာ ပြန်လည်ကူးယူ ဖော်ပြလို့ရနိုင်မလား ?
သတင်းများကို အခြား Social Network နှင့် အခြား Media များ တွင်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ပြန်လည် ကူးယူ ဖော်ပြခြင်း၊ တဆင့် ပြန်လည် ရောင်းချခြင်း များကို “လုံးဝ” ခွင့် မပြုပါ။
၄၉။ လိုတရ ဝက်ဆိုဒ် မှ တဆင့် ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း ကို Download လုပ်လို့ ရနိုင်ပါသလား?
လိုတရ ဝက်ဆိုဒ် စာမျက်နှာ၏ ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း Download Link မှ တိုက်ရိုက် အခမဲ့ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
၅၁။ Promotion အစီအစဉ်မှာပါဝင် ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်လဲ?
လိုတရ ဝက်ဆိုဒ်မှ တဆင့် Download ရယူထားရပါမည်။ Download ရယူပြီးပါက ဘောလုံးစတား၏ ဝန်ဆောင်မှု ကို ရယူ ရပါမည်။ ထို အချက် ၂ ချက်နှင့် ကိုက်ညီပါက Promotion အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ပြီး ဖြစ်ပါပြီ။
၅၃။ Promotion မှာ ဘာတွေလက်ဆောင်ပေးမှာလဲ ?
Promotion အတွက် MPT M50 Handset ၁ ပါတ်လျှင် ၁၀ လုံး ကို ၄ ပါတ် တိတိ စုစုပေါင်း အလုံး ၄၀ ကို မဲစနစ် နဲဲ့ ရွေးချယ် မဲ ဖောက်ပေးသွားမှာပါ။
၂။ ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း ကို အသုံးပြုဖို့ ဘာတွေလိုအပ်လဲ ?
ပထမဦးစွာ ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း ကို Download link များမှာ Download ရယူ ထားရပါမည်။ Download ပြုလုပ်ပြီးပါက မိမိအသုံးပြုနေသာ မိုဘိုင်းဖုန်းထဲသို့ Install ပြုလုပ် ထည့်သွင်း ရပါမည်။ Install ထည့်သွင်းချင်းအဆင့် ပြီးပါက MPT ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူပြီး နေ့စဉ် သတင်းများကို အကန့်အသတ် မရှိဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။
၄။ ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း ကို မည်သည့်နေရာမှ ရယူနိုင်ပါလဲ၊ ဘယ်လို အသုံးပြုနိုင်မလဲ ?
. Android ဖုန်းအသုံးပြုသူများအတွက် Google Play Store (http://goo.gl/d41Ogj) မှ ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါတယ် . iPhont အသုံးပြုသူများအတွက် Apple Store (http://bit.ly/2p7Hrw7)မှ ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါတယ်။
. လိုတရ ဝက်ဆိုဒ် (http://lotayamm.com/) တွင် BalloneStar Mobile Application ကို အခမဲ့ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
. MPT ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် 8118 သို့ DL ဟုစာတိုပေးပို့ကာ Download link ရယူနိုင်ပါတယ်။
ဒေါင်းလုပ်ရယူပြီးပါက မိမိ အသုံးပြုနေသော ဖုန်းထဲသို့ Install ပြုလုပ်ကာ ဘောလုံးစတား
မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း ၏ ၀န်ဆောင်မှုကို စတင် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
၆။ ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း ကို ဖုန်းထဲထည့်သွင်းပြီးတာနဲ့ သတင်းအားလုံးဖတ်လို့ရပြီလား၊ ဘာတွေလိုအပ်သေးလဲ?
ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း ကို ဖုန်းထဲထည့်သွင်းပြီးပါက MPT ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် ၀န်ဆောင်မှု ကို ရယူပြီး သတင်းအားလုံးကို နေ့စဉ် အကန့်အသတ်မရှိ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် ။ ၀န်ဆောင်မှု ရယူရာတွင် လူကြီးမင်း၏ MPT ဖုန်းနံပါတ်နှင့် အတူ လျှို့ဝှက်နံပါတ် (password) တစ်ခု သတ်မှတ် ပေးရပါမည်။
၈။ ကျွန်တော့လျှို့ဝှက်နံပါတ် (password) ပြောင်းချင် ရင် ဘယ်လိုုလုပ်မလဲ?
လျှို့ ဝှတ်နံပါတ် (password) ပြောင်းလဲ လို ပါက ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း ထဲမှ Forgot Password ကိုနှိပ်ပြီး BalloneStar မှအတည်ပြု ကုဒ် ကို ပြန်လည်ရယူရပါမည်။ အတည်ပြု ကုဒ် ပြန်လည် လက်ခံရရှိပါက လူကြီးမင်း ကြိုက်နှစ်သက်ရာ လျှို့ဝှက် နံပါတ် အသစ်ကို သတ်မှတ်နိုင်ပါပြီ။
၁၀။ ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း မှာ ၀န်ဆောင်မှု ရယူလိုပါက ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲ?
ဝန်ဆောင်မှု ရယူအသုံးပြုရန် (သို့) ၀န်ဆောင်မှုရယူရန် အတွက် ၀န်ဆောင်မှုရယူပုံ ၂ မျိုးရှိပါတယ်။ ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း မှ တိုက်ရိုက် ၀န်ဆောင်မှုရယူနိုင်ပါသည်။ ၁ ရက် စာအတွက် DD ကို ရွေးချယ်ရပါမည်၊ ၁ ပါတ် စာအတွက် ww ဟု ရွေးချယ် နိုင်ပါသည်။
ထို့ပြင် လူကြီးမင်း၏ မိုလ်ဘိုင်းဖုန်း တွင် MPT ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် Message မှ တစ်ဆင့် ၁ ရက် စာအတွက် 8118 သို့ DD ဟု စာတို ပေးပို့ရမှာ ဖြစ်ပြီး၊ ၁ ပါတ် စာအတွက် 8118 သို့ WW ဟုစာတို ပေးပို့ ကာ ၀န်ဆောင်မှု ရယူ ၍ အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။
၀န်ဆောင်မှုယူရာတွင် လူကြီးမင်း၏ MPT ဖုန်းနံပါတ်နှင့် အတူ လျှို့ဝှက်နံပါတ် (password) တစ်ခု သတ်မှတ်ပေး ရပါမည်။
၁၂။ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ကနေ နောက်ထက် ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုကို ပြောင်းလို့ ရလား ?
ဝန်ဆောင်မှု ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ မိမိ ရယူ လိုသောဝန်ဆောင်မှုအတွက် 8118 သို့ MPT ဖုန်းနံပါတ်ဖြင် စာတိုပေးရပါမည်။ ၁ ရက်ဝန်ဆောင်မှု အတွက် DD ၊ ၁ ပါတ်ဝန်ဆောင်မှု အတွက် WW ဟုစာတို ပေးပို့ပါ။
၁၄။ ဆက်ပြီး အသုံးမပြုချင်တော့ရင် (ဘယ်လိုရပ်လို့ရလဲ / ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ) ?
ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း မှ ဝန်ဆောင်မှုများ ရပ်တန့်လိုပါက 8118 သို့ “UNSUBBS” ဟု စာတို ပေးပို့ ပေးရပါမည်။
၁၆။ ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း နဲ့ ပါတ်သတ်လို့ သိချင်တာရှိရင် ဘယ်လိုစုံစမ်းရမလဲ။
MPT ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် 8118 သို့ HELP ဟု စာတို ပေးပို့ကာ အကူအညီ ရယူ နိုင်ပါသည်။
၁၈။ ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း က သတင်းတွေ ကို တစ်ခြားဘယ်နေရာမှာ ဖတ်ရှုလို့ ရနိုင်သေးလဲ ?
ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း မှ သတင်းများ အားလုံးသည် နိုင်ငံတကာ၏ ဘောလုံး သတင်းဌာနများမှ တဆင့် ဝယ်ယူကာ တရားဝင် လွှင့်တင် ပေးထားသည့်အတွက် BalloneStar Mobile Application တွင်သာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံနှင့် စုံလင်စွာ ဖတ်ရှုနိုင်မှာပါ။
ဘောလုံးစတား၏ facebook စာမျက်နှာနှင့် လိုတရ ဝက်ဆိုဒ်တို့တွင်လဲ ဘောလုံးစတား သတင်းဌာနမှ ဘောလုံး သတင်း တစ်ချို့ ဖော်ပြပေးပါတယ်။
၂၀။ Internet connection လိုအပ်ပါသလား ?
Internet Connection လိုအပ်ပါတယ်။
၂၂။ ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း မှာ သတင်းတွေကနေ့စဉ် အသစ်တင်ပေးမှာလား၊ တနေ့ ဘယ်နှစ်ပုဒ် လောက် တက်မှာလဲ ?
သတင်းများကို နေ့စဉ် အချိန်နှင့်အမျှ အသစ်တင်ပေးပါသည်၊ တစ်နေ့တာအတွက် ဗီဒီယိုသတင်းအပါအဝင် သတင်းအားလုံးစုစု ပေါင်း အနည်းဆုံး ၄၀ မှ ၆၀ ပုဒ်အထိ တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂၄။ ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း မှာ ဘောလုံးပွဲတွေ ကို Live ကြည့်လို့ ရလား?
လောလောဆယ် ကြည့်လို့ မရသေးပါဘူး၊ နောက်ပိုင်းမှာ ကုန်ကျမှု သက်သာစွာဖြင့် Live ကြည့်ရှု့လို့ ရနိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။
၂၆။ ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း မှာ ယခုပါဝင်သော ခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲက အဖြေမှန်တဲ့သူကို ဘာပေးတာလဲ ?
ခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲတွင် အဖြေမှန်သူများကို Lucky Draw အစီအစဉ်တွင် ကြေငြာထားသည့်အတိုင်း ရွေးချယ်ပြီး ဆုလက်ဆောင်များ ပြန်လည်ပေးအပ်သွားပါမည်။
၂၈။ ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း မှာ အခြား ဘာပြိုင်ပွဲတွေ ၊ အစီအစဉ်တွေ ရှိသေးလဲ ?
ခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲအပြင် ၊ Live TV Program အစီအစဉ်များ၊ ဘောလုံးအသင်းများ၏ Fun များနှင် တိုက်ရိုက် တွေ့ဆုံမေမြန်းချင်း နှင့် အခြား Lucky Draw အစီအစဉ် များကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း နှင့် ဘောလုံးစတား Facebook Page တို့မှာ အစီအစဉ်မတိုင်မီ ကြိုတင် အသိပေး အကြောင်းကြားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃၀။ ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း မှာ ဘောလုံးသတင်းနှင့် ပါတ်သတ်ပြီး ကြိုက်တာမေးလို့ရနိုင်လား ?
ဘောလုံးသတင်းနှင့် ပါတ်သတ်ပြီး သိလိုသမျှ ကို ဘောလုံးစတား ၏ Customer Service ဝန်ဆောင်မှုဌာန ဖုန်းနံပါတ် (၀၉၄၅၅၅၀၀၄၄၀၊ ၀၉၄၅၅၅၀၀၈၈၀) သို့ ဆက်သွယ်ပြီး မေးမြန်းနိုင်သလို၊ ဘောလုံးစတား Facebook Page မှာလည်း ဝင်ရောက် မေးမြန်း နိုင်ပါတယ်။
၃၂။ ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း ၏ ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုဖို့ အခြား ဆင်းမ်ကတ် တွေနဲ့ရော မရဘူးလား ?
MPT ဖုန်းကဒ် ဖြင့်သာ ဝန်ဆောင်ခကို ပေးချေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားမည်သည့် ဆင်းမ်ကတ်နှင့်မှ မရပါ။
၃၄။ ဘယ်ဖုန်းမဆို အသုံးပြုလို့ ရလား?
Android Version 4.0 နှင့် အထက်မည်သည့် Android ဖုန်းမဆို အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ Google Play Store မှ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
၃၆။ သတင်းတွေက English ဘာသာနဲ့လား မြန်မာဘာသာနဲ့လား ?
သတင်းအားလုံးကို မြန်မာဘာသာစကားဖြင့်သာဖော်ပြ ပေးထားပါတယ် ။
၃၈။ အသုံးပြုပုံလေး သိချင်ပါတယ် ?
အသုံးပြုပုံအသေးစိတ်ကို ဓါတ်ပုံ ၊ ဗီဒီယို တို့ဖြင့် ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း တွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြ ပေးထားမှာ ဖြစ်ပြီး ဘောလုံးစတား Facebook Page မှာလဲ အပါတ်စဉ် ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ပြင် ဘောလုံးစတား၏ Customer Service ဖုန်းနံပါတ်(၀၉၄၅၅၅၀၀၄၄၀ , ၀၉၄၅၅၅၀၀၈၈၀ , ၁၀၆) သို့လည်း ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး ဆက်သွယ် မေးမြန်း နိုင်ပါတယ်။
၄၀။ ဘယ်လို ပွဲကြို တွေတင်ပေးသလဲ ?
ပရီးမီးယားလိဂ်၊ စပိန်၊ လာလီဂါ၊ စီးရီးအေ၊ ချန်ပီယံလိဂ် အစရှိသည့် ပွဲကြို အချက်အလက်များကို ပွဲမကစားမှီ တင်ပေးပါတယ်။
၄၂။ အပြောင်းအရွေ့ သတင်းတွေ တင်ပေးလား ?
အပြောင်းအရွှေ့ သတင်းတွေအားလုံးကို တင်ပေးပါတယ်။ Up to date သတင်း၊ အရေးပေါ်သတင်းများကိုပါ အချိန်နှင့် အမျှ တင်ပေးနေ ပါသည်။
၄၄။ အသင်းတစ်သင်းနှင့် တစ်သင်းတို့၏ ထိပ်တိုက် တွေ့ဆုံ မှု သတင်းတွေဖော်ပြပေးလား?
ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှု များကို စဉ်ဆက်မပျက် ပွဲစဉ်တွေရှိသည့် အချိန်တိုင်း ဖော်ပြပေးပါတယ်။
၄၆။ ဘောလုံးသမားတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းတွေရောတင်ပေးလား ?
ဘောလုံးသများများ၏ ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုသတင်းများဖြစည်သည့် လှုမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ အချစ်ရေး၊ လတ်တလော လှုပ်ရှားမှု၊ မွေးနေ့ စသည့် ကိစ္စအဝဝကို Up To Date အကုန် တင်ပေးပါတယ်။
၄၈။ လိုတရ ဝက်ဆိုဒ် မှာ ဘောလုံးစတား မှ သတင်းတွေဖက်လို့ ရပါလား ?
လိုတရ ဝက်ဆိုဒ် စာမျက်မှာပေါ်တွင် ဘောလုံးစတားမှ နေ့စဉ် အားကစားသတင်းအချို့ ကိုလွင့်တင်ပေးပါတယ်။
၅၀။ လိုတရ ဝက်ဆိုဒ် မှာတင်ထားတဲ့ Download link မှာ Download လုပ်ရင် ဘာပိုထူးမှာလဲ ?
လိုတရ ဝက်ဆိုဒ် မှာတင်ထားတဲ့ Download Link မှ Download ရယူပါက အက်ပလီကေးရှင်း Download လုပ်ချင်းအတွက် ဒေတာ ကုန်ကျမှု မရှိပဲ အခမဲ့ Download ရယူနိုင်ပါတယ်၊ လိုတရ ဝက်ဆိုဒ် မှ Download ရယူပြီး ဘောလုံစတား ဝန်ဆောင်မှု ရယူ ပါက (၃၀.၈.၂၀၁၇) ရက်မှ (၃၀.၉.၂၀၁၇) အတွင်း ကျင်းပမည် Promotion အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
၅၂။ Promotion က လတိုင်းပေးနေမှာလား ?
Promotion က လတိုင်း အတွက်မဟုတ် ပါဘူး သတ်မှတ်ရက်အတွင်းသာ Promotion ပေးမှာပါ။ သို့ သော Promotion အစီအစဉ် အသစ်များရှိပါက အလျှင်းသင့်သလို ကြေငြာ ပေးသွားပါမည်။
၅၄။ ဘောလုံးစတား မှ သတင်းများ နှင့် ပါတ်သတ်ပြီး လိုတရ ဝတ်ဆိုဒ် မှာ မေးလို့ ရပါသလား?
ဘောလုံးစတား နှင့်ပါတ်သက်ပြီး မေးမြန်းလိုပါက ဘောလုံးစတား ၏ Facebook Page နှင့် ဘောလုံးစတား ၏ Customer Service ဖုန်းနံပါတ် (၀၉၄၅၅၅၀၀၄၄၀၊ ၀၉၄၅၅၅၀၀၈၈၀) ၊ Viber နံပါတ် (၀၉၄၅၅၅၀၀၄၄၀) သို ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဩဂုတ် 30, 2017 Categories General mm
MPT ၏ ဘောလုံးစတား အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်ဖြင့် နောက်ဆုံးပေါ် ဘောလုံးသတင်းအချက်အလက်များကို လက်လွတ်မခံဘဲ ရယူနိုင်မည်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်) – မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံး ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ ဖြစ်သော MPT သည် ဘောလုံးအက်ပလီကေးရှင်းအသစ်ဖြစ်သည့် “ဘောလုံးစတား” အက်ပလီကေးရှင်းကို စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ယနေ့သတင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ် ဘောလုံးသတင်းအချက်အလက်များ၊ မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောဘောလုံးအသင်းများ၊ အားကစားသမားများ၏ နောက်ဆုံးရသတင်းများ၊ ဂိုးရလဒ်များ ကိုသာမက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဘောလုံးသတင်းများကို ရယူနိုင်မည့် ဘောလုံးစတား အက်ပလီကေးရှင်းကို မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ရယူသိရှိနိုင်တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။
ယခု ထုတ်လုပ်လိုက်သော “ဘောလုံးစတား” အက်ပလီကေးရှင်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ လူကြိုက် အများဆုံး ဘောလုံးအားကစား ပြိုင်ပွဲသတင်းများ၊ ဘောလုံးချစ်သူများကြားတွင် ရေပန်းစားနေသော နိုင်ငံတကာလိဂ်ပွဲစဉ်(၇)ခုထက်မနည်း များပြားလှသော ပြိုင်ပွဲသတင်းများကို MPT ကွန်ရက် အသုံးပြု သူများ၏ လက်တွင်းသို့ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ရောက်ရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။ သုံးစွဲသူများမှ မိမိနှစ်သက်ရာ ကလပ်အသင်းများ၊ နိုင်ငံတကာအသင်းများနှင့် ကစားသမားများကို ရွေးချယ်ပြီး ၎င်းတို့၏ သတင်းများကို စောင့်ကြည့်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် အသုံးပြုသူများ ရယူသုံးစွဲတွင် အဆင်ပြေလွယ်ကူစေရန် ရေးဆွဲထားခြင်းကြောင့့် ဗွီဒီယိုများ၊ ပွဲစဉ်အချိန်ဇယားများ၊ ရှုံးထွက် ပွဲပယ်များ နှင့် ဒဏ်ရာရ နောက်ဆုံးရသတင်းများ၊ တိုက်ရိုက်ဂိုးရလဒ်များနှင့် ပွဲကြို ခန့်မှန်းချက်များ စသည့် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ အကြောင်းအရာများ အားလုံးကို “ဘောလုံးစတား” အက်ပလီကေးရှင်းပေါ်မှတစ်ဆင့် သိရှိနို်င်မည် ဖြစ်ပါသည်။
MPT-KSGM Joint Operations ၏ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr. Reizo Umeda က “ ဘောလုံးအားကစားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တကယ့်ကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အားပေးလေ့ရှိတဲ့ မြန်မာဘောလုံး ပရိတ်သတ်တွေကြားမှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက အောင်မြင်နေတဲ့ ဘောလုံးအသင်းတွေအကြောင်း၊ ဘောလုံးအားကစားသမားတွေအကြောင်းကို အခုလို မြန်မာဘာသာနဲ့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိရှိစေနိုင်မယ့် MPT အသုံးပြုသူသီးသန့် အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်ကို ထုတ်လုပ် ဖြန့်ချိနိုင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တိ့ု အနေနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားဂုဏ်ယူနေမိပါတယ်။ အရင်က ဘောလုံးအားကစားကိုနှစ်ခြိုက်တဲ့ ဝါသနာရှင် ပရိတ်သတ်တွေက သူတို့လက်လွတ်မခံချင်တဲ့ ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေကို တီဗီသတင်းကနေဖြစ်စေ၊ သတင်းစာ ဂျာနယ်တွေကနေဖြစ်စေ အချိန်ပေးပြီး စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြရတာပါ။ အခု ဘောလုံးစတားအက်ပလီကေးရှင်းနဲ့ ဆိုရင်တော့ ဘောလုံးအားကစား ကြိုက်နှစ်သက်သူများ အတွက် အဆင်အပြေဆုံး နည်းလမ်းကောင်း တစ်ခု ရှာဖွေတွေ့ရှိစေမှာဖြစ်ပြီး မလွတ်တမ်းစောင့်ကြည့ချင်တဲ့ ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေအတွက် ဂိုးရလဒ်တွေ၊ ဘောလုံးလောက ပညာရှင်တွေရဲ့ ပွဲကြိုခန့်မှန်းသုံးသပ်ချက်တွေ အပြင် ဘောလုံးပွဲသတင်း ဗီဒီယိုတွေကို MPT ရဲ့ အကြီးမားဆုံးနဲ့ အကျယ်ပြန့်ဆုံး ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ပေါ်က တစ်ဆင့် အချိန်နဲ့ တပြေးညီ လွယ်ကူစွာ သိရှိနိုင်တော့မှာပါ။” ဟု ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။
ဘောလုံးစတား ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူရန် စာရင်းသွင်းရမည့် ပုံစံမှာ ရိုးရှင်းပြီး အက်ပလီကေးရှင်းကို မိမိတို့၏ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအင်တာနက်ဖြင့် အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အန်းဒရွိုက် မိုဘို်င်းလ်ဖုန်း အသုံးပြုသူများ အတွက် ဘောလုံးစတားအက်ပလီကေးရှင်းကို လိုတရဝက်ဘ်ဆိုက် (http://bs.lotayamm.com) ပေါ်မှ တစ်ဆင့် အခမဲ့ဒေါင်းလုတ် ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် 8118 သို့ “DL” ဟု စာတို ပေးပို့ကာ အက်ပလီကေးရှင်း ဒေါင်းလုတ် လုပ်ရန် လင့်ခ်ကို SMS မှ တစ်ဆင့် ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
စာရင်းသွင်းခြင်းပြီးဆုံးပါက ဝန်ဆောင်မှုကို သင့်တင့်သော နှုန်းထားဖြင့် စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်ကာ အသုံးပြုသူစိတ်ကြိုက် တစ်ရက်တာ နှင့် တစ်ပတ်စာ စနစ်ဟူ၍ ရွေးချယ်ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ရက်တာ အသုံးပြုသူများအတွက် ဝန်ဆောင်ခ (၁၀၅)ကျပ်၊ တစ်ပတ်တာ အသုံးပြုသူများအတွက် ဝန်ဆောင်ခ (၅၂၅)ကျပ် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်ခများကို ၄င်းတို့၏ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဘေလ် အတွင်းမှ ဖြတ်တောက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ရက်တာ ရယူရန် 8118 သို့ “DD”ဟု လည်ကောင်း၊ တစ်ပတ်စာ ရယူရန် “ww”ဟု လည်ကောင်း စာတိုပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဘောလုံးစတားအက်ပလီကေးရှင်းကို ပထမဆုံးအကြိမ် စာရင်းသွင်း အသုံးပြုသူများအတွက် MPT မှ စတင်အသုံးပြုခြင်း အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် တစ်ပတ်တိတိ အခမဲ့ အသုံးပြုခွင့်ကို ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အခမဲ့အသုံးပြုခွင့် အချိန်အတိုင်းအတာ ပြီးဆုံးလျင်မူ သုံးစွဲသူများရယူထားသည့် ဝန်ဆောင်မှု စနစ်အတိုင်း နှုန်းထားများကို စတင်ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဘောလုံးစတား အယ်ပလီကေးရှင်း မိတ်ဆက်ခြင်း အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ထပ်ဆင့် ကျေးဇူးတုန့်ပြန်သည့် အနေနှင့် MPTမှ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်များကို အပတ်စဉ် ပြုလုပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး အယ်ပလီကေးရှင်း အသုံးပြုသူများအနေနှင့် MPT ၏ 4G စနစ်သုံး M-50A စမတ်ဖုန်းများကို ပါဝင်ကံစမ်းရယူနို်င်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အစီအစဉ် နှုန်းထား(ကျပ်) ရယူရန်
တစ်ရက်တာ ၁၀၅ 8118 သို့ ‘DD’ ဟု စာတိုပေးပို့ခြင်း
တစ်ပတ်စာ ၅၂၅ 8118 သို့ ‘WW’ ဟု စာတိုပေးပို့ခြင်း
မှတ်ချက် : ဝန်ဆောင်ခနှုန်းထားများတွင် ကုန်သွယ်ခွန် ၅ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်ပြီးသား ဖြစ်ပါသည်။*
ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းနှင့်ပတ်သတ်၍ ပိုမိုအသေးစိတ်သိရှိလိုပါက MPT ၏ Call Center နံပါတ် 106 သို့ ခေါ်ဆို၍ ဖြစ်စေ၊ Customer Service Team ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၅၅၅၀၀၄၄၀ (သို့မဟုတ်) ၀၉-၄၅၅၅ ၀၀၈၈၀ သို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်၍ဖြစ်စေ မေးမြန်းနို်င်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဩဂုတ် 30, 2017 ဩဂုတ် 30, 2017 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
(ရန်ကုန်၊ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်၊ ၂၀၁၇) – MPT အနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေးနှင့် ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်ရန်အတွက် လက်ရှိအသုံးပြုနေသော အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို ဂဏန်း (၇) လုံးပါရှိသည့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်အသစ်များဖြင့် ပြောင်းလဲ တပ်ဆင်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါ သည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ ၀န်ကြီးများရုံး RSU အိတ်ချိန်းကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၃၁)ရက်နေ့ နှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်ရှိ ပလိပ်အိတ်ချိန်းကို ၂၀၁၇ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၅)ရက်နေ့တို့တွင် ခေတ်မီ အိတ်ချိန်းစက်များ နှင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များလည်း အောက်ပါ အတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Continue reading “ ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များလဲလှယ်မည်ဖြစ်သဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များအားပြောင်းလဲမည်”
Author MPT TelecommunicationPosted on ဩဂုတ် 25, 2017 ဩဂုတ် 25, 2017 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
MPT ၏ သောကြာနေ့တိုင်း ဖုန်းငွေဖြည့် အပိုလက်ဆောင် Happy Friday အစီအစဉ်အသစ်ဖြင့် ပိုမိုပျော်ရွှင်သည့်အားလပ်ရက်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်) – MPT ၏ ပြန်လည်ဆန်းသစ်ထားသည့် Happy Friday အစီအစဉ်သစ်ဖြင့် သောကြာနေ့တိုင်း မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ငွေဖြည့်သူများအတွက် ငွေဖြည့်လက်ဆောင်အစီအစဉ်ကို မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ယခုအစီအစဉ်အရ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမြန်ဆုံးကွန်ရက်ပေါ်တွင် ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ စာတိုပေးပို့ခြင်းနှင့် အင်တာနက် အသုံးပြုခြင်းများကိုပါ ပြုလုပ်နိုင်မည့် ငွေဖြည့်အပို လက်ဆောင်ကို ရရှိအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ ယခုအစီအစဉ်သစ် Happy Friday ဖြင့် MPT သုံးစွဲသူများ အနေဖြင့် စနေ၊ တနင်္ဂနွေ အားလပ်ရက်များအတွင်း မိမိတို့၏ မိိသားစုများ၊ မိတ်ဆွေများနှင့် ပိုမိုဆက်သွယ် နိုင်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။
ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်သည့် MPT ၏ သောကြာနေ့ ငွေဖြည့် အပိုလက်ဆောင်အစီအစဉ်တွင် အနည်းဆုံးအဖြစ် ငွေတစ်ထောင်ကျပ်ကို ခဲခြစ်ငွေဖြည့်သွင်းလိုက်ရုံဖြင့် ရရှိလာသည့် အပိုလက်ဆောင်ကို အင်တာနက်သာမက MPT အချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ စာတိုပေးပို့ခြင်း စသည်များတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် နောက်ထပ်ငွေဖြည့်သွင်းသည့် ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည့် e-Top Up ဖြင့် အဆင်ပြေစွာ ငွေဖြည့်သွင်းပါကလည်း ငွေဖြည့်အပိုလက်ဆောင်ပမာဏ (၅၀)ကျပ်မှ (၄,၀၀၀)ကျပ်အထိ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ယခု Happy Friday ငွေဖြည့်အပိုလက်ဆောင်အစီအစဉ်သစ်ကို MPT ၏ ရှယ်ပြော၊ ဆွေသဟာ နှင့် ရိုးရိုး Base Tariff ရယူထားသည့် ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းဖြင့် သုံးစွဲနေသော GSM/ WCDMA မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အသုံးပြုနေသူများက အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ရရှိလာသည့် ငွေဖြည့်အပိုလက်ဆောင် ပမာဏကို စစ်ဆေးလိုပါက 1331 သို့ BAL ဟုစာတိုပေးပို့ခြင်း (သို့မဟုတ်) *224# သို့ ဖုန်းခေါ်ဆို ခြင်းတို့ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
MPT-KSGM Joint Operations ၏ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr. Reizo Umeda က “ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MPTကွန်ရက်ကို အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ ရက်သတ္တပတ်ကုန် အားလပ်ရက်တွေမှာ သူတို့အတွက် နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ လက်ဆောင်တစ်ခုခုသာ ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျေနပ်ပီတိ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာ ကို ကျွန်တော်တို့ အကောင်းဆုံးနားလည်သိရှိထားပါတယ်။ ဒီအတွက် MPT က အခုလို အပိုလက်ဆောင် အစီအစဉ်သစ်ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အရင်က အင်တာနက်ဒေတာ တစ်ခုသာ အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်တာကနေ အခုဆိုရင် MPT အချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုတာနဲ့ SMS တွေ ပေးပို့နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနို်င်ငံရဲ့အဆင့်မြင့် LTE+ ကွန်ရက်နဲ့ မြန်နှုန်းမြင့်ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့အတူ MPT သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ အားလပ်ရက်၊ ပိတ်ရက်တွေမှာ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ ချစ်ခင်ရသူတွေအကြား ပိုပိုပြီး အဆက်အသွယ်မပြတ်ဘဲ နီးနီးကပ်ကပ်ရှိစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။” ဟု ပြောကြားသည်။
သောကြာနေ့တိုင်း ငွေဖြည့်အပိုလက်ဆောင် Happy Friday Bonus အစီအစဉ် တွင် ရရှိမည့် အပိုလက်ဆောင်၏ သက်တမ်းမှာ ငွေဖြည့်လက်ဆောင်ရရှိသည့် သောကြာနေ့နှင့် ကပ်လျက်ရှိသော တနင်္ဂနွေနေ့ည သန်းခေါင်ယံ အချိန် ၂၃: ၅၉ :၅၉ နာရီအထိ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သောကြာနေ့တိုင်း ငွေဖြည့်အပိုလက်ဆောင်အစီအစဉ်သစ် ခံစားခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
သောကြာနေ့ငွေဖြည့် အပို လက်ဆောင် (Happy Friday) အစီအစဉ်သစ်
ခဲခြစ်ငွေဖြည့်ကတ် e-Top Up
၅၀၀ – ၅၀
၁၀၀၀ ၁၀၀ ၁၅၀
၃၀၀၀ ၄၅၀ ၇၅၀
၅၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၇၅၀
၁၀၀၀၀ တိုင်းအတွက် ၂၅၀၀ ၄၀၀၀
*ငွေဖြည့်အပိုလက်ဆောင်မှာ တနင်္ဂနွေနေ့ည သန်းခေါင်းယံအချိန်ထိသာ အကျုံးဝင်ပါသည်။*
Author MPT TelecommunicationPosted on ဩဂုတ် 24, 2017 ဩဂုတ် 24, 2017 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
၂၀၁၇ ဆီးဂိမ်းအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မလေးရှားနိုင်ငံတွင်း အသုံးပြုမည့် MPT ဖုန်းများအားလုံး အဝင်လက်ခံဖြေကြားမှု အခမဲ့နှင့် အင်တာနက်ဒေတာအတွက် (၈)ကျပ်သာ ကောက်ခံမည့်အစီအစဉ် စတင်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်) – မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ကျင်းပလျက်ရှိသော (၂၉)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ (ဆီးဂိမ်း) ကို ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် ယင်းနိုင်ငံအတွင်း MPT ဆင်းမ်ကတ် သုံးစွဲသူများ၏ ဖုန်းအဝင်လက်ခံဖြေကြားမှုအားလုံးကို “အခမဲ့” ရယူအသုံးပြုနိုင်စေမည့် ဝန်ဆောင်မှု အသစ်တစ်ရပ်ကို MPT က စတင်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်။
ယခင်က မလေးရှားနို်င်ငံတွင်း MPT ဆင်းမ်ကတ် အသုံးပြုသူများအတွက် အဝင်ဖုန်း လက်ခံဖြေကြားမှု ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားမှာ တစ်မိနစ်လျှင် (၇၀၀)ကျပ်ဖြစ်ရာမှ ယခုဆီးဂိမ်းဂုဏ်ပြုအစီအစဉ်အဖြစ် အဝင်ဖုန်းများကို ဝန်ဆောင်ခ အခမဲ့ဖြင့် လက်ခံဖြေကြားနိုင်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် ဆီးဂိမ်းကျင်းပရာ နိုင်ငံတွင်းရှိ MPT ကွန်ရက်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် အင်တာနက်ပေါ်မှတစ်ဆင့် လွယ်ကူ လျင်မြန်စွာ ချိတ်ဆက်နို်င်စေရန် အင်တာနက်ဒေတာနှုန်းထားကို ၁ မီဂါဘိုက်လျှင် ၈ ကျပ်နှုန်းသာ ကောက်ခံ သွားမည် ဖြစ်သောကြောင့် အသုံးပြုသူများအတွက် လွန်စွာသက်သာကောင်းမွန်သည့် နှုန်းထားသစ်တစ်ခု လည်းဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပါ အထူးနှုန်းထားအစီအစဉ်သစ်ကို မလေးရှားနိုင်ငံတွင်း MPT ၏ GSM/WCDMA ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက်ကို အသုံးပြုသည့် ကြိုတင်ငွေပေးချေသည့် နည်းလမ်းဖြင့် သုံးစွဲသူများအတွက် ယခု သြဂုတ်လ (၂၂)ရက်မှ စတင်ကာ ရယူအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ဝန်ဆောင်မှု အတွက် MPT သို့ စာရင်သွင်းခ ပေးရန်လည်း လိုအပ်မည် မဟုတ်ပါ။ သို့သော် မလေးရှားနိုင်ငံတွင်းတွင် အသုံးပြုခြင်းအတွက် Data Roaming ဖွင့်ထားရန် ၁၃၃၂ သို့ “RMDON” ဟု စာတို ပေးပို့ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆီးဂိမ်းဂုဏ်ပြု အထူးနှုန်းထားအစီအစဉ်တွင် ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲနှင့်ဆက်စပ်၍ မလေးရှားသို့ ရောက်ရှိနေကြသည့် MPT သုံးစွဲသူများအတွက် MPT ဆင်းမ်းကတ်မှ တစ်ဆင့် ယင်းနိုင်ငံတွင်း ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါက တစ်မိနစ်လျှင် ၁၅၀ ကျပ် အထူးနှုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှ မည်သည့် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်သို့မဆို ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွက် လည်း တစ်မိနစ်လျှင် ၂၀၀ ကျပ်နှုန်းထားသာ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှလွဲ၍ အခြားသော နိုင်ငံတကာသို့ ဖုန်းခေါ်မှုအတွက်များအတွက်လည်း ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ ကို တစ်မိနစ်လျှင် (၅၀၀)ကျပ်သို့ လျှော့ချပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး စာတို(SMS) ပေးပို့ခြင်းအတွက်မူ စာတစ်စောင်လျှင် ၅၀ကျပ်နှုန်းဖြင့်သာ ပြောင်းလဲကောက်ခံပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
MPT-KSGM Joint Operations ၏ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr.Reizo Umeda က “MPT သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ အခုလို MPT ရဲ့ အထူးသက်သာတဲ့ Roaming နှုန်းထားကို အသုံးပြုခြင်းနဲ့အတူ မလေးရှားနိုင်ငံမှာ ကျင်းပနေတဲ့ အားကစားပြိုင်ပွဲတွေကို စိတ်အားထက်သန်စွာ အားပေးနေကြသူတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဆွေမျိုး၊ မိသားစု တွေအကြားမှာ ပျော်ရွှင်စရာတွေကို အတူတကွ မျှှဝေခံစားသွားနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ MPT ရဲ့ အခုလို ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး သုံးစွဲသူတွေအတွက် အထူးကောင်းမွန်သက်သာတဲ့ခေါ်ဆိုခ၊ SMS၊ အင်တာနက်နဲ့ ဒေတာနှုန်းထားတွေနဲ့အတူ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နေကြတဲ့ မြန်မာအားကစားသမားတွေ အားလုံး အောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့အတွက် အားပေးနေကြတဲ့ သူတွေအကုန်လုံးကို အကောင်းဆုံး အသုံးပြုနိုင် လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဆီးဂိမ်းဂုဏ်ပြုသည့် MPT ၏ ခေါ်ဆိုခနှုန်းထားလျှော့ချပေးသော ယခုအစီအစဉ်မှာ ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲများ အတွက်သာမက မလေးရှားနိုင်ငံတွင်း နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား များနှင့် ၄င်းတို့၏ မိသားစု၊ ချစ်ခင်မြတ်နို်းရသူများအကြား ကွာဝေးနေမှုများကို လျှော့ချပေးလိုက်နိုင်မည့် အစီအစဉ် တစ်ရပ်လည်း ဖြစ်ပါသည်။
ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအမျိုးအစား အခြေခံနှုန်းထား (ကျပ်) ပရိုမိုးရှင်း နှုန်းထား (ကျပ်)
မလေးရှားနိုင်ငံတွင်း ဖုန်းသို့များခေါ်ဆိုခြင်း (ကျပ်/မိနစ်) ၉၀၀ ၁၅၀
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း (ကျပ်/မိနစ်) ၁၀၀၀ ၂၀၀
အခြားနိုင်ငံများသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း (ကျပ်/မိနစ်) ၁၅၀၀ ၅၀၀
မည်သည့် ဖုန်းအဝင်မဆို လက်ခံခြင်း(ကျပ်/မိနစ်) ၇၀၀ Free
စာတိုပေးပို့ခြင်း (ကျပ်/စောင်ရေ) ၄၀၀ ၅၀
အင်တာနက်ဒေတာ ( ကျပ်/ မက်ဂါဘိုက်) ၅၀၀ ၈
Author MPT TelecommunicationPosted on ဩဂုတ် 22, 2017 ဩဂုတ် 22, 2017 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
Toll Free Call FAQ MM
General » Toll Free Call
၁။ Toll Free Call ဆိုတာ ဘာလဲ။
Toll Free Call သည် စျေးကွက်စီးပွားရေး နှင့် ၀ယ်သူဖောက်သည် တို့၏ ဆက်သွယ်တုံ့ပြန်မှု များအတွက် ငွေပေးချေမှုပုံစံကို ဆက်သွယ်လာသူ ဝယ်သူဖောက်သည်များမှ ဆက်သွယ်မှုကုန်ကျစရိတ် ပေးဆောင်ရန် မလိုပဲ ဖုန်းလက်ခံဖြေကြားသူ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များ ဘက်ကသာ ထို ကုန်ကျစရိတ် ကိုပေးဆောင်စေမည့် ၀န်ဆောင်မှု ဖြစ်သည်။
၃။ ၀ယ်သူဖောက်သည် အနေနဲ့ ဘယ်လိုငွေပေးချေရမလဲ။
၀ယ်သူဖောက်သည် အနေနဲ့ ကနဦးတပ်ဆင်ခ၊ လစဥ်ကြေး၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုခ များကိုပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။
၅။ Toll Free Call number သို့ဘယ်လို ဖုန်းကွန်ရက်မှ ဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသလဲ။
MPT အော်တိုတယ်လီဖုန်းလိုင်း နှင့် MPT မိုဘိုင်းဖုန်းများမှ Toll Free Call number သို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။
၂။ Toll Free Call service ကို ဘယ်လိုလျောက်ရမလဲ။
B2B အရောင်းဌာနရှိ ၀န်ထမ်းများမှ ၀ယ်သူဖောက်သည်တို့အား တိုက်ရိုက်၀န်ဆောင်မှုပေး၍ သော်လည်းကောင်း၊ အီးမေးလိပ်စာ : b[email protected] နှင့် ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၄၂၆၀၀၀၃၂၃ သို့ ဆက်သွယ်၍သော်လည်းကောင်း ၀န်ဆောင်မှုလျောက်ထားနိုင်ပါသည်။
၄။ Toll Free Call number ကို မည်သို့သော ဖုန်းကွန်ရက်မှ လျောက်ထားနိုင်ပါသလဲ။
MPT အော်တိုတယ်လီဖုန်းလိုင်းမှသာ Toll Free Call number ကိုလျောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဩဂုတ် 21, 2017 ဒီဇင်ဘာ 28, 2017 Categories Uncategorized
MPT မှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး “ဖုန်းခေါ်ဆိုသူအတွက် အခမဲ့” ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်သည့် Toll Free Call ဝန်ဆောင်မှုကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးစတင်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်) MPT ၏ နောက်ဆုံးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းသုံး “ဖုန်းခေါ်ဆိုသူအတွက် အခမဲ့” ၀န်ဆောင်မှုကို စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်ကာ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် မိမိတို့သိရှိလိုသည့် အရောင်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ၎င်းတို့ဆက်သွယ်လိုက်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ MPT ၏ ယခုဝန်ဆောင်မှုကို ရယူထားခြင်းဖြစ်ပါက ဖုန်းခေါ်ဆိုခ ကျသင့်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ ယခုလို MPT ၏ “ဖုန်းခေါ်ဆိုသူအတွက် အခမဲ့” ဝန်ဆောင်မှု မှာ ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာများထဲတွင် ပထမဆုံးသော ဝန်ဆောင်မှု ပေးအပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ၎င်းတို့၏ သုံးစွဲသူ ဖောက်သည်များနှင့် ပိုမိုအဆင်ပြေလွယ်ကူသည့် နည်းလမ်းဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်များ ရရှိလာတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။
MPT အနေဖြင့် ယခုလို ၀၈၀၀ ၈၀၀ x xxx ဖြင့်စသည့် “ဖုန်းခေါ်ဆိုသူအတွက် အခမဲ့” ဖုန်းနံပါတ်များကို အော်တို တယ်လီဖုန်းလိုင်း(ကြိုးဖုန်းလိုင်း) မှတစ်ဆင့် လက်ခံနိုင်ရန် စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး MPT ၏ မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးပြုသူများနှင့် အော်တိုတယ်လီုဖုန်း အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုခပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ဘဲ ယင်းဖုန်းနံပါတ်များသို့ ခေါ်ဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အသုံးပြုသူများသည် အဆိုပါ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ Toll Free နံပါတ်များသို့ ခေါ်ဆိုရာတွင် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွက် အခကြေးငွေ ကျသင့်မည်မဟုတ်ဘဲ သက်ဆိုင်ရာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထံမှသာ လစဉ်လတိုင်း ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဖုန်းခေါ်ဆိုသူများသည် ၎င်းတို့ခေါ်ဆိုလိုသော လုပ်ငန်း အမျိုးအစားအလိုက် သတ်မှတ်ထားသော ကုတ်နံပါတ်မှတစ်ဆင့် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ၀၈၀၀ ၈၀၀ ၏ နောက်တွင်ကပ်လျက် ပါရှိသော ဂဏန်းသည် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားကို ညွှန်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
“MPT ရဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူထားတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ ကော်ပိုရိတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေ အနေနဲ့ မိမိတိုရဲ့ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ဝယ်ယူလိုသူ၊ စုံစမ်းလိုသူတွေက ဆက်သွယ်လာတဲ့အခါမှာ ဆက်သွယ်သူတွေအတွက် ဖုန်းခေါ်ဆိုခကုန်ကျမှာကို စိုးရိမ်စရာမရှိကြောင်းပြောဆိုနိုင်ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ်မှာပဲ အထင်အမြင်ကောင်းတွေကို ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးနဲ့ ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်တဲ့ နေရာတွေမှာ Toll Free ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ ဖောက်သည်တွေကို ကျေနပ်မှုပိုပြီး ပေးစွမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်သလို ဖုန်းခေါ်ဆိုသူတွေအနေနဲ့လည်း ဖုန်းခေါ်ဆိုရာမှာ ကုန်ကျစရိတ်အတွက် စိုးရိမ်စရာမလိုတဲ့အတွက် Call Center တွေအနေနဲ့လဲ မိမိတို့ဖောက်သည်တွေရဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုကို အပြည့်အဝ ပေးလာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေက MPT ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် အခြားပြိုင်ဘက် တွေထက်စာရင် အားသာချက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု MPT-KSGM Joint Operations ၏ Chief Commercial Officer Mr. Reizo Umeda က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
MPT Toll Free ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် MPT ၏ B2B အရောင်းဌာနသို့ [email protected] အီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ (သို့မဟုတ်) Hot Line ဖုန်းနံပါတ် ၀၈၀၀ ၈၀၀ ၉၉၉၀ (MPT အော်တိုဖုန်း နှင့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများမှ ဖုန်းခေါ်ပါက အခမဲ့) သို့့ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သလို အခြားအော်ပရေတောများ၏ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများမှလည်း ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၂၆၀၀၀၃၂၃ သို့့ ဆက်သွယ်စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား Toll Free နံပါတ်များ
တက္ကစီ ၀၈၀၀ ၈၀၀ ၁xxx
ဘဏ် ၀၈၀၀ ၈၀၀ ၂xxx
ဆေးရုံ ၀၈၀၀ ၈၀၀ ၃xxx
ပညာရေး ၀၈၀၀ ၈၀၀ ၄xxx
လူမှုဖူလုံရေး ၀၈၀၀ ၈၀၀ ၅xxx
ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ၀၈၀၀ ၈၀၀ ၆xxx
စီးပွားရေး နှင့် အခြား Business လုပ်ငန်းများ ၀၈၀၀ ၈၀၀ ၇xxx
အခြား ၀၈၀၀ ၈၀၀ ၉xxx
xxx – Toll Free ဝန်ဆောင်မှုရယူနိုင်သည့် နံပါတ် (ဂဏန်း ၃ လုံး)
Author MPT TelecommunicationPosted on ဩဂုတ် 21, 2017 ဩဂုတ် 21, 2017 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
MPT LTE+ မြန်နှုန်းမြင့်ကွန်ရက်ကို မြို့ကြီး (၆) မြို့တွင် သြဂုတ်လအတွင်း ထပ်မံချိတ်ဆက်သွားမည်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်) MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် လားရှိုး၊ ညောင်ဦး၊ မြစ်ကြီးနားနှင့် ဘားအံမြို့များတွင် 1.8GHz လှိုင်းနှုန်းစဉ်ရှိ မြန်နှုန်းမြင့် 4G နည်းပညာကွန်ရက် ဝန်ဆောင်မှုကို ပထမဆုံးအကြိမ် သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်မှစတင်၍ အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး ကျိုင်းတုံ နှင့် လွိုင်ကော်ဒေသတို့တွင် ယခုလ ၂၄ ရက်မှ စတင်ကာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ မြန်နှုန်းမြင့် LTE+ ကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုကို နေရာသစ် (၆) နေရာဖြစ်သည့် ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ မန္တလေး၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းဒေသများရှိ သုံးစွဲသူများထံ ဆက်လက်ဖြန့်ကျက် ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
MPT အနေဖြင့် 4×4 MIMO အဆင့်မြင့်နည်းပညာအသုံးပြုထားသည့် LTE+ ကွန်ရက်ဖြန့်ကျက်မှုကို နိုင်ငံအနှံ့လွှမ်းခြုံနိုင်ရန်အတွက် မိုဘိုင်းလ်တာဝါ ကွန်ရက်များကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ပြောင်းလဲခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် MPT မှ LTE+ ကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုကို သြဂုတ်လအကုန်တွင် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြို့ကြီး (၂၈) မြို့အပါအဝင် မြို့နယ်ပေါင်း (၇၈) ခုအထိ ဆက်လက်ချဲ့ထွင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။
MPT မှ သုံးစွဲသူများအတွက် ကျေးဇူးတုန့်ပြန်သည့် အနေဖြင့် MPT ၏ LTE+ ကွန်ရက်ဖြန့်ကျက်သွားမည့် အထက်ပါနေရာများရှိ မြို့များတွင် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်များကို ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် MPT ဆင်းမ်ကတ်အသစ်များ ရောင်းချခြင်း၊ ဆင်းမ်းကတ်လဲ လှယ်ပေးခြင်းများ အပြင် အခြားအဖိုးတန်လက်ဆောင်များနှင့် ငွေဖြည့်ကတ်များကိုလည်း အထူးပရိုမိုးရှင်း အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်၍ ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
MPT-KSGM Joint Operations ၏ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr.Reizo Umeda က “ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ကွန်ရက်ဖြန့်ကျက်မြှင့်တင်မှုမှာ သာမန် 4G/LTE ထက် မြန်နှုန်း ၂ ဆပိုတဲ့ 4×4 MIMO နည်းပညာကို အသုံးပြုထားတာ ဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ 4G မျိုးဆက်သစ် အင်တာနက်အမြန်နှုန်းကို 150 Mbps အထိတိုးမြှင့်အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် MPT ကိုအသုံးပြုကြမယ့် ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွေမှာပါ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ချိတ်ဆက်မှုတွေနဲ့ သုံးစွဲနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။” ဟုပြောကြားခဲ့ပါသည်။
“ ဒါ့အပြင် MPT က သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေမှာ နေထိုင်တဲ့သုံးစွဲသူများကို တန်ဖိုးထားတဲ့အနေနဲ့ ကွန်ရက်ဖြန့်ကျက်မြှင့်တင်နိုင်မှု အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများပါဝင်တဲ့ အခမ်းအနားများကို ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါတယ်” ဟု Mr.Reizo Umeda ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
MPT ၏ “ရှေ့သို့လှမ်းချီ မြန်မာပြည်” ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ သြဂုတ်လအတွင်း LTE+ ကွန်ရက်ဖြန့်ကျက်ချဲ့ ထွင်ခြင်း အစီအစဉ်များ နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားရှိ ကျန်ရှိနေသေးသည့် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း ဒေသအသီးသီးရှိ မြို့ကြီးများတွင်လည်း LTE+ ကွန်ရက်ကို ဆက်လက် လွှမ်းခြုံပေးနိုင်ရန်အတွက် စဉ်ဆက်မပြတ် စီစဉ်ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ပါသည်။
LTE+ ကွန်ရက် အသစ် ဖြန့်ကျက်သည့် နေရာအသစ်များ
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) လားရှိုး
ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း) ကျိုင်းတုံ
မှတ်ချက်။ ။ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့အထိ MPT ၏ 1.8 GHZ လှိုင်းနှုန်းစဉ်ဖြင့် LTE+ ကွန်ရက်ကို ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြို့ကြီး (၂၈) မြို့အပါအဝင် မြို့နယ် (၇၈) မြို့နယ်တွင်ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဩဂုတ် 17, 2017 ဩဂုတ် 17, 2017 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
MPT မှ ပူတာအိုဒေသတွင် ကွန်ရက်ဖြန့်ကျက်မှု တိုးချဲ့
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ တစ်ခု ဖြစ်သည့် MPT မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏မြောက်ဖျားပိုင်းဒေသဖြစ်သော ကချင်ပြည်နယ်တွင် တာဝါကွန်ရက် အဆင့်မြှင့်တင်မှုကို အပြီးသတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ဝေးလံခေါင်ဖျားပြီး နှင်းများဖုံးလွှမ်းနေသော တောင်တန်းများ ပတ်လည်ဝိုင်းရံနေသည့် ပူတာအိုဒေသရှိ MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ယခုအခါ ပိုမိုလျင်မြန်သောဒေတာမြန်နှုန်း နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအရည်အသွေးများကို ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
ယင်းကဲ့သို့ အဆင့်မြှင့်တင်မှုကို အဆိုပါဒေသရှိ လက်ရှိတာဝါတိုင်ကွန်ရက်တွင် Satellite-based မှ Microwave boosted စနစ် ကို ပြောင်းလဲတပ်ဆင်လိုက်သည့် အပြင် တာဝါတိုင်များ ထပ်မံတိုးချဲ့လိုက်ခြင်း ကြောင့် မြန်နှုန်းမြင့် 2G/3G ချိတ်ဆက်မှုများ နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို ပြုလုပ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
MPT သည် အဆိုပါဒေသရှိ သုံးစွဲသူများကို တန်ဖိုးထားသည့်အနေဖြင့် နာမည်ကျော်အထင်ကရနေရာ တစ်ခုဖြစ်သော လေယာဉ်ကွင်းစျေး၌ ဒေသခံပြည်သူများအတွက် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများပါဝင်သော အခမ်းအနားတစ်ခုကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် MPT ဆင်းမ်ကတ်အသစ်များ၊ SIM ကတ် လဲလှယ်မှုများအပြင် တန်ဖိုးကြီး လက်ဆောင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ ငွေဖြည့်ကတ်များ၊ အထူးပရိုမိုးရှင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားသို့ ကချင်ပြည်နယ်ရှိ MPT မှ တာဝန်ရှိသူများ ၊ ဝန်ထမ်းများ နှင့် ဒေသခံပြည်သူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး အခြားလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်သည့် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဂိမ််းကစားခြင်း၊၊ MPT Photo Booth တွင် အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း တို့တွင်လည်း အတူတကွ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါသည်။
MPT-KSGM Joint Operation ၏ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr.Reizo Umeda က “ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ကွန်ရက်ဖြန့်ကျက်မြှင့်တင်မှုကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြောက်ဖျားပိုင်းဒေသက မြို့လေးမှာ တိုးချဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ အခုလို ကွန်ရက်မြှင့်တင်မှုကြောင့် ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ မိုဘိုင်းလ်ခေါ်ဆိုမှု တွေရော အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွေမှာပါ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ချိတ်ဆက်မှုတွေနဲ့ သုံးစွဲနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ လက်ရှိတာဝါတွေကို အဆင့်မြှင့်တင်ရုံသာမက အလွန်လှပတဲ့ ဒီမြို့က ဒေသခံတွေကို မိမိတို့ဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့အခါ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာဖြင့် ခေါ်ဆိုမှုရနိုင်ရန်အတွက် တာဝါတွေကို ပိုမိုစိုက်ထူခဲ့ခြင်းဖြစ် ပါတယ်။ ဒါဟာ ရှေ့သို့လှမ်းချီ မြန်မာပြည်ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်နဲ့အညီ ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ ဒေသက လူမှုပတ်ဝန်း ကျင်တွေအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံကို အဆင့်မြင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေ သယ်ဆောင်လာဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို မီးမောင်းထိုးပြနေပါတယ်” ဟုပြောကြားခဲ့ပါသည်။
MPT အနေဖြင့် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ကွန်ရက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေသလို မျိုးဆက်သစ် မြန်နှုန်းမြင့် ကွန်ရက်ကနေတဆင့် မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများဖြင့် ဆက်သွယ်ခြင်း၊ လူမှုရေးမီဒီယာတွေ အသုံးပြုခြင်းနှင့် အွန်လိုင်းဗီဒီယိုကြည့်ရှုခြင်းတို့ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား နှင့် ဖားကန့်ရှိ ဒေသခံများထံ LTE+ ချိတ်ဆက်မှုကိုလည်း မကြာသေးခင်က မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဩဂုတ် 16, 2017 ဩဂုတ် 16, 2017 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
MPT မှ တောင်ကြီး စီးပွားရေးစင်တာ သို့ LTE+ ဆက်သွယ်မှုဖြင့် ကွန်ရက်ဖြန့်ကျက်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်) ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့၏ စီးပွားရေလုပ်ငန်း ဌာနတစ်ခုအဖြစ် တစ်နေ့တစ်ခြား ပိုမိုအရေးပါလာသည့် အသစ်တည်ဆောက်ထားသော တောင်ကြီးစီးပွားရေးစင်တာ (TBC) မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံး တယ်လီကွန်းဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာဖြစ်သည့် MPT၏ မျိုးဆက်သစ် 4X4 MIMO စနစ်သုံး LTE+ မိုဘိုင်းလ်ဆက်သွယ်မှုကွန်ရက် အပါအဝင် ပိုမိုကောင်းမွန်မြန်ဆန်သော ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု တို့ဖြင့် ချိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ စီးပွားရေးစင်တာသည် တောင်ကြီးမြို့အနီးတွင်တည်ရှိပြီး ရှမ်းပြည်နယ်၏ ကျယ်ပြန့်လာသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဆောင်ရွက်နိုင််ရန်အတွက် အထူးတည်ဆောက်ထားသည့် နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ MPT ၏ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက် ချဲ့ထွင်မှုများကြောင့် ယခုလို စီးပွားရေးအချက်အချာ နေရာတွင်အခြေစိုက်နေသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည် အလွန်မြင့်မားသော ဆက်သွယ်မှုကို ရယူအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုနယ်မြေအတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်လာစေမည် ဖြစ်ပါသည်။
ယခုလို တောင်ကြီးစီးပွားရေးစင်တာနှင့် အနီးဝန်းကျင်ဧရိယာများသို့ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ၊ အထောက်အပံ့များ တိုးတက်ရရှိလာသည့်အတွက် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်သော အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်နေသော အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လွယ်ကူအဆင်ပြေသော နေရာတစ်ခု ရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။ အလားတူပင် ယခုလို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် အသင့်ဖြစ်စေမည့် ဖိတ်ခေါ်မှုနှင့်အတူ လှပပြီး လူသိများထင်ရှားသည့် တောင်ကြီးကဲ့သို့သော နေရာမျိုးအတွက် ဆက်သွယ်မှုရရှိနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ရာ၌် ပထဝီဝင်အနေအထားနှင့် အခြားသော ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု နည်းပညာများကို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အခက်အခဲများနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုလည်း ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။
တနင်္လာနေ့က တောင်ကြီးမြို့တွင်ကျင်းပခဲ့သော ရေဒီယိုဆက်သွယ်ရးစခန်း ဖွင့်လှစ်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီး MPT-KSGM Joint Operations ၏ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr. Reizo Umeda မှ “ဒေသတွင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကြားမှာ ရေပန်းစားလာတဲ့ တောင်ကြီး စီးပွားရေးစင်တာမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ LTE+ ကွန်ရက်ကို အသုံးပြုပြီး ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းတွေ ပိုမိုတိုးတက်လာနိုင်စေရေးအတွက် အကောင်းဆုံးအနေအထားတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ဖို့ကို ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အချက်အချာကျတဲ့ ဒီလိုနယ်မြေဒေသရဲ့ ကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအတွက် အကောင်းဆုံး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေကို တိုးတက်စေဖို့အတွက် ကောင်းမွန်ပြီး စိတ်ချရတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တစ်ခု မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။ ကွန်ရက်ဖြန့်ကျက်မှုကို တိုးတက်စေခြင်းနဲ့ အနာဂတ်အတွက် တယ်လီကွန်းဆက်သွယ်ရေး ချဲ့ထွင်မှုလုပ်ငန်းတွေ ပေါင်းစပ်ပြီး ဒေသတွင်းမှာ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အလားတူပင် ယခုနယ်မြေအတွင်းတွင် တည်ရှိနေသော ပို့ဆောင်ရေး ဆက်သွယ်မှုအသစ်များ၊ ဟိုတယ်များနှင့် စားသောက်ဆိုင်များကို ကွန်ရက်လွှမ်းခြံုနိုင်ခြင်းနှင့်အတူ MPT အနေဖြင့် မဝေးတော့သည့် အချိန်ကာလအတွင်း ဒေသကိုအကျိုးပြုစေမည့် ကွန်ရက်ဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦအသစ်များကို ထပ်မံ တိုးချဲ့ တည်ဆောက် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဩဂုတ် 15, 2017 ဩဂုတ် 15, 2017 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm